Waxbarashada aasaasiga ah - www.hameenlinna.fi
Hämeenlinna.fi / Kaupunki-info / Soomaali / Waxbarashada aasaasiga ah
Waxbarashada dadka waa weyn ee aasaasiga ah
Sharciga ayaa amaraya in Finland dhexdeeda caruurta sida rasmiga ah ugu nool ay khasab ku tahay oo saaran tahay waajibaad waxbarasho. Caruurta waxaa khasab ah in la baro aqoonta iyo farsamada ay u baahan yihiin marka ay weynaadaan bulshada dhexdeeda. Aqoontaas iyo xeeladaha la barayo caruurta wuxuu ku qaadanayaa waxbarashada aasaasiga ah ama iskoolka.
Iskoolku wuxuu guud ahaan bilaabmaa, marka ilmuhu jiro 7-sano. Iskoolku waa 9 fasal, waxaana la dhigtaa caadi ahaan 9 sano.
Iskoolka dhexdiisa ilmaha waxaa la baraa aqoon uu u baahan yahay iyo tabo ama xeelado farsamo. Iskoolka dhexdiisa ilmuhu wuxuu ka heleyaa horumar dadnimo inuu yeesho iyo inuu noqdo xubin bulshada ka mid ah.
Waxbarashada aasaasiga ahi waa lacag la'aan. Dugisga hoose-dhexe marka uu dhamaysto ilmuhu waxaa suurtogal u ah inuu waxbarashadiisa ka sii wato dugsiga sare ama dugsiyada farsamada gacanta ee xirfadaha lagu barto.
Waxaad weydiin kartaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan arimaha waxbarashadda xafiiska Pakolaisten vastaanotto shaqaalaha jooga, waxaad kaloo weydiin kartaa warbixin shaqaaaha caruurta iyo dhalinyarada u adeegga ee xafiiiska Palvelupiste Kastelli.
Waxbarshada diyaar-garoowga ah
Ilmuhu inta uusan iskoolka la bilaabin caruurta fiilaandeeyska, waxaa khasab ku ah ilmaha inuu afka finnishka si fiican oo ku filan u yaqaan.
Waxbarashada diyaar-garoowga ah waxaa loogu talo-galay caruurta da'doodu u dhaxayso 7-17 sano jir oo ajaanibta ah. Ilmuhu wuxuu baranayaa mudada uu ku jiro waxbarashada diyaar-garoowga ah arimaha aasaasiga ah ee luuqqadda finnishka. Waxbarashadani waxay socotaa 1-2 sano.
Intaas ka bacdi ilmuhu wuxuu u wareegaa iskoolka ku yaal agtiisa ama ah kan ugu dhow gurigooda. Ilmaha waxaa la geeyaa oo uu iskoolka ka bilaabaa fasal u dhigma aqoontiisa.